Laakin hindise cusub ayaa si firfircoon ula xisaabtamaya dowladaha iyo hay'adaha, kaasoo taageero iyo dardargelin ka hela halganka sinaanta, iyo caddaalada haweenka Afrika.
Febraayo 2019 waxaa la bilaabay, istaraatijiyadda Midowga Afrika (AU) ee Sinnaanta Jinsiga iyo Awood-siinta Haweenka (GEWE) kaasoo ah siyaasad jinsi loo dhan yahay oo dhinacyo badan leh ee Afrika.
Midowga Afrika wuxuu hiigsanayaa in uu yareeyo, ama xittaa baabi'iyo, caqabadaha waaweyn ee hortaagan sinnaanta jinsiga iyo awood-siinta haweenka, si haweenka iyo gabdhuhu ay si buuxda uga qayb-qaataan hawlaha dhaqaalaha, arrimaha siyaasadda iyo dadaallada bulshada.
Istaraatiijiyadu waxay leedahay afar tiir, iyadoo tiir kastaa qeexayo natiijooyin gaar ah, waxqabadyo la soo jeediyay, iyo bartilmaameedyo.
Tiirka 1 wuxuu diiradda saarayaa sare u qaadida fursadaha, natiijooyinka iyo ka faa'iidaysiga faa'iidooyinka farsamada cusub. Asal ahaan, hindisuhu waxaa loogu talagalay in lagu xoojiyo dhaqaalaha haweenku, si ay u awoodaan inay si wax ku ool ah uga qaybqaataan horumar waara, laakiin si ay sidaasi u sameyaan waa inay helaan waxbarasho tayo leh iyo xakameyn karaan kheyraadka wax soo saarka leh.
Istaraatiijiyadda GEWE waxay soo jeedinaysaa olole qaaradeed oo lagu sheegayo in 'aqoon la'aanta wax aqriska" uu yahay caado dhaqameed waxyeello leh iyo "ka saaridda dugsiga" ka dhigaayo dembi ciqaab leh. Waxa kale oo ay ku baaqaysaa maalgelin la taaban karo oo loogu talagalay shirkadaha bilowga ah iyo xarumaha hal-abuurka ee kor u qaada xalalka jinsiga iyo kordhiya ka qayb-qaadashada siman iyo waxtar leh ee haweenka iyo gabdhaha goobta tignoolajiyada.
3 gabdhood 1 oo ay da'doodu u dhaxayso 15-19 ayaa la kulmay nooc ka mid ah Gudniinka Fircooniga ah ee 30 waddan ee Afrika iyo Bariga Dhexe.
Tiirka labaad waxa uu dajinayaa soo-jeedin lagu caawinayo haweenka iyo gabdhaha si ay u lahaadaan sharaf, ammaan iyo daacadnimo jireed iyo maskaxeed. Xadgudubyada haweenka iyo dhaqamada ay ka mid yihiin guurka xilliga hore iyo gudniinka fircooniga ah ayaa weli ku badan Afrika.
Istaraatiijiyada GEWE waxay soo jeedinaysaa in la dhaqan geliyo hab-raacyada AU ee ku aaddan joojinta Tacaddiyada ka dhanka ah Haweenka iyo Gabdhaha (VAWG) iyo in la maalgeliyo mashaariicda qaranka si loo ciqaabo VAWG. Sheekooyinkii ugu dambeeyay ee lagu guuleystay waxaa ka mid ah shaqaaleysiinta darawallada tagsiilayaasha mootada ee Guinea, kuwaas oo noqday indhaha iyo dhegaha bulshada intii lagu jiray bandowga, iyagoo isha ku haya haweenka khatarta ku jira.
Iyadoo Afrika ay horumar ka samaysay sharciyada iyo siyaasadaha iyo hay'adaha lagu horumariyo iyo lagu ilaaliyo xuquuqda haweenka, tiirka 3 ayaa bartilmaameedsanaya hoos u dhaca weyn marka ay timaado hirgelinta waxtarka leh ee sharciyadaas.
2016-kii, Soomaaliya waxay gaartay meel wanaagsan iyadoo ku dhawaad afar meelood meel kuraasta baarlamaanka ay fadhiyeen haween. Iyadoo ay taageerayaan GEWE, dalal badan oo Afrikaan ah ayaa ku baaqaya in qoondaynta 30% ee kuraasta sharci dejinta loo qabto haweenka doorashada soo socota.
Tiirka 4 wuxuu la xiriiraa hoggaaminta, codka iyo muuqaalka, iyadoo la aqoonsanayo in haweenka si ay cod u yeeshaan, ay u baahan yihiin inay si siman uga muuqdaan dhammaan dhinacyada go'aan qaadashada. Tani waxay si gaar ah u khusaysaa marka diiradda la saarayo haweenka ka soo horjeeda dulmiga, oo u hadla sinaanta iyo mustaqbalka Afrika.
'Haddii aynaan haweenka gelin buugaagta taariikhda, waxaa laga saarayaa taariikhda.'
- Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, guddoomiyihii hore ee AUC